Ngubani Ondiphindileyo? | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 9, 2010 NgeCawa, ngoJulayi 5, 2015 Douglas Karr
Ezintsuku zimbalwa zidlulileyo abantu bandibuze, ndingafumanisa njani ukuba ngubani ophinde wandiphinda? Xa abantu besebenzisa i-retweet feature ngaphakathi kwe-Twitter, kulula kakhulu. Ukungena kwi-Twitter kunokucofa Iifayile kwicala lasekunene lokuhamba. Ikholamu yesithathu yile IiTweets zakho, iTwitter kwaye ikunika uluhlu lwazo zonke iiTweets zakho eziye zabhalwa kwakhona kunye nokuba ngubani owazenzayo.
Kukho ifayile ye- API fowunela ukufaka idatha ye-retweet yetwitter enikiweyo. Ukuphinda ubhale ngokutsha ngumsebenzi ofanele ukulandelwa… ukuba umntu othile unyusa umxholo wakho, unommeli wakho okanye uphawu lwakho. Lowo mntu awungekhe unqwenele ukulandela kuphela, kodwa umntu onokufuna ukulandela ukubandakanyeka okunzulu kunye naye!
Umxhasi: I-Twitter yindlela elungileyo yokutsala inani elikhulu leebhali kumyalezo wakho wentengiso- kodwa uninzi lwabantu aluyazi into abayenzayo kwaye bagqibela ngokungafumani mpendulo. Nokuba abanabalandeli abaneleyo, okanye bathumela imiyalezo engeyiyo ngexesha elingalunganga okanye benze enye okanye ezininzi iimpazamo ezibulalayo. Cofa apha ukufunda indlela elula kunye nokuziphatha yokukhulisa i-Twitter yakho elandelayo.
tags: Phinda ubhalengubani ophendule kwakhonangubani obuye wandiphinda
Imidiya yokuncokola + Uhlalutyo = Ayichanekanga
Icandelo lokuThengisa iDrip: Musa ukuncanca.
Sep 10, 2010 ngo-2: 32 PM
Inkohliso encinci. Enkosi ngokuthumela uDoug!
Jan 20, 2011 ngo-11: 46 PM
Kusoloko kumnandi ukubona izithuba ezindala zikhutshelwa kunye neqela lamaTweets! Ngubani oyiphindaphindileyo? 😉
Mar 16, 2011 ngo 1:28 PM
Molo mfondini, xa ndicofa kwi-tweet yam ekwicandelo eliphinda liThotywe ngaBanye, alunalo noluhlu lophinda luphindwe kubhalwe kwakhona njengoko kuqhele ukwenziwa. Naluphi na uluvo kutheni? okanye ndingabona njani ukuba ngubani?
Meyi 25, 2011 kwi-4: 06 AM
Ndifunda ukuba kusenokwenzeka ukuba iphinde yabhalwa kwakhona ngabantu ongabalandeliyo nangabantu abakhusela ii-tweets zabo
Jul 9, 2011 ngo-1: 16 AM
isebenza njani le app
Jul 9, 2011 ngo-2: 20 AM
Ayisiyo iapp, uKarberney, eneneni iluphawu ngaphakathi kwedashboard ye-Twitter.
Mar 6, 2012 ngo 4:46 PM
wow yintoni elahlekileyo.
ukunciphisa umzimba, thatha ishawa, usike iindevu zakho ezimbi, kwaye okona kubaluleke kakhulu, yeka ukutsho ukuba kukuphambanisa ububhanxa kunye nokubi, ukukuthumela kwi-Intanethi. Ukuphulukana nesidenge
Mar 7, 2012 ngo 12:32 PM
Ungasebenzisa kwakhona http://www.tweetreach.com, http://www.sharedcount.com, http://www.whotweetedme.com, kunye nomnye wemithombo engathandekiyo yokufumanisa ukuba ngubani ophindaphindiweyo ukuba abe ngumcebisi we-Empire Avenue 'uKesley'.